Ray Hudson oo tilmaamay in James Milner uu la mid yahay halyeeyga kooxda Inter Milan – Gool FM
(Yurub) 16 Okt 2020. Tababarihii hore ee kooxda Inter Milan, ahna khabiir ku xeel dheer kubadda cagta Ingariiska ee Ray Hudson ayaa sheegay inay isku mid yihiin James Milner iyo halyeeyga Nerazzurri ee Javier Zanetti.
Ray Hudson ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Javier Zanetti lama uusan saxiixin waqtigaas Inter maxaa yeelay wuxuu ahaa ciyaaryahan weyn, sababtoo ah Inter waxay dooneysay inay la soo saxiixato weeraryahan la yiraahdo Sebastian Rembert, Zanetti wuxuu qeyb ka ahaa heshiiska”.
“Ma uusan lahayn wax boos ah ama xiddignimo marka uu imaanayay Inter, laakiin waxaa ii cadaatay inuu leeyahay awood aan caadi aheyn marka loo eego awooda jir ahaaneed, qofka kaliya ee kale ee aan la soo shaqeeyay isla markaana leh awooda jireed waa James Milner”.
”Haa, waxa uu la mid ahaa xiddiga Liverpool, waxa uu lahaa awood jir ahaaneed oo cajiib ah oo uu ku ordi karo waligiisna isma dhiibin, kubaddaha ayaa lagu ciyaarayay hortiisa ama meel fog waxaana u maleynayay in uu kubadda luminayo laakiin wuxuu ahaa mid la macaamilo arrintaas, wuuna sii fiicnaaday muddo kaddib”.
“Wuxuu iska dhigay laacibka uu haatan yahay, sababtoo ah wuxuu ahaa xiddig kubadd sameeye ah, sidoo kale wuxuu ahaa mid xikmad badan oo og waxa uu sameyn karo iyo waxa uusan sameyn Karin”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan si toos ah u tilmaamo isku ekaanshaha weyn ee u dhexeeya Zanetti iyo James Milner, kaasoo isla shaqadaas oo kale ka qabtay kooxda Liverpool”.